बिहेगर्न केटा नपाएपछी....
उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् । यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो सहरमा एकजना पनि अविवाहित पुरुष छैनन् । तर ६ सय जना अविवाहित महिला छन् । ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका तरुनी छन् ।
यता चीनमा भने महिलाको खडेरी छ र एकल पुरुषहरुको संख्या बढिरहेको छ । भनिन्छ, भविष्यमा चीनका २५ प्रतिशत पुरुष कि त अविवाहित बस्नुपर्छ कि त जस्तो पाएपनि केटी खोजेर बिहे गर्नुपर्छ । एजेन्सी
मस्टा गाउँपालिकाका प्रहरी चौकी इञ्चार्ज भाटकाे दादागिरी : क्वारेन्टाइनमा बसेका युवकलाई कुटे
लुसुक्क भारतीय राजदुत भेट्न किन पुगे बास्कोटा ?
रुकुम पश्‍चिम ‘हत्याकाण्ड’बारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन
कोभिड–१९ विरुद्ध नेपालको खोपमा ७३ देशका विज्ञको चासो : परीक्षणमा डब्ल्युएचओले सघाउने
बिज्ञापनमा प्रहरी बर्दीको दुरुपयोग, एआईजी शैलेशनै स्कुटरको कम्पनीको प्रचारमा
प्रदेश नं २ मा कोभिड–१९ सङ्क्रमण १ हजार
कोरोनासँग लड्न आर्थिक सहयोगका लागि ‘न्यूड तस्बिर’ बेच्छिन् यी अभिनेत्रीले
सरकार ! पेटभरी खान मन छ
विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रपति किन बंकरमा लुक्न बाध्य भए ?